အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်များကို လေ့လာရန်သင်ခန်းစာသီအိုရီနှင့် လက်တွေ့များနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း
Mapping the Engineering Competencies to Study Lesson Theory and Practical
အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ လိုအပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်တွေကို သီအိုရီနဲ့ လက်တွေ့လေ့လာမှုနဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ အရေးကြီး ပါသည်။
ဤဗီဒီယိုတွင် Dr Kyaw Naing IPEM IQY Education Group သည် IQY IPEM Education Group ၏ တက္ကသိုလ်များနှင့် ကောလိပ်များမှ ပေးအပ်သော အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့် လက်တွေ့လေ့လာမှုနှင့် လေ့ကျင့်မှုများဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လိုအပ်သော အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်များကို မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း တင်ဆက်ထားပါသည်။
ကျောင်းသားများသည် Skills Visa လျှောက်ထားမှုအတွက် လိုအပ်သော အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုဗီဇာလျှောက်လွှာအတွက် လိုအပ်သော သြစတြေးလျ အင်ဂျင်နီယာအသင်းဝင် အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် လျှောက်ထားရန်အတွက် Engineering Competency Demonstration Report (CDR) ကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက်လည်း အဆိုပါအချက်အလက်များကို မှီငြမ်းနိုင်ပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်များကို ASCO Dictionary (Australian Standards of Occupational Classifications Dictionary) မှ ထုတ်နုတ်ထားပါသည်။
To work as an engineer, it is important to connect the required engineering competencies at the workplace to theory and practical study and training.
In this video, Dr Kyaw Naing IPEM IQY Education Group presents how engineering competencies required at the workplace be connected with theory and practical study and training provided in Engineering degree and diploma courses delivered by IQY IPEM Education Group’s Universities and Colleges.
The students can also apply such information to prepare Engineering Competency Demonstration Report (CDR) to apply for Membership of Engineers Australia regarding Skills assessment required for Skills Visa application as engineer.
The engineering competencies are extracted from ASCO Dictionary (Australian Standards of Occupational Classifications Dictionary).